မန်းပဲမျိုးစုံဈေးကွက်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ဆက်တိုက်ဝယ်ယူမှုကြောင့် ပဲစင်းငုံဈေးနှုန်း ကျ? - Yangon Media Group
ယခုရက်ပိုင်း မန္တလေးမြို့၊ ပဲမျိုးစုံဈေးကွက် တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှဆက်တိုက်ဝယ် ယူနေမှုကြောင့် ပဲစင်းငုံဈေးနှုန်းမှာ တစ်အိတ်လျှင်ကျပ်တစ်သိန်းနီးပါး မြင့်တက်လာနေပြီး ပြည်တွင်းစား သုံးမှုများသည့်ပဲအမျိုးအစားမှာ ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်စွာဖြင့် အရောင်း အဝယ်ပုံမှန်ဖြစ်လျက်ရှိကြောင်း ပဲကုန်သည်များနှင့်စက်ပိုင်များထံ မှသိရသည်။
”ပဲစင်းငုံ(အနီ)ဈေးနှုန်းက မေ လဆန်းပိုင်းကတည်းက တစ်အိတ်ကို ကျပ် ၉ဝဝဝဝ ဝန်းကျင်ရှိနေ ရာမှာ အဓိကတင်ပို့နေရတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေ တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင် ရက်အနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုရှိတဲ့ အတွက် ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာ ဈေးနှုန်း အနည်းငယ်ကျဆင်းမှုရှိခဲ့ပေမယ့် လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ကျပ်တစ် သိန်းနီးပါးကိုရောက်ရှိနေတယ်။ အဟောင်းထက်အသစ်တွေက ပို မိုဈေးကောင်းနေပြီး အခုလိုမျိုး ပဲစင်းငုံဈေးနှုန်းတွေအမြင့်ပိုင်းရောက် နေချိန်မှာ တောင်သူတွေထဲမှာ တော့ ပစ္စည်းကလက်ကျန်မရှိတော့ ပဲ လှောင်လက်သမားတွေကပဲ အပြိုင်အဆိုင်ထုတ်ရောင်းနေကြ ပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေဒီထက် အရေအတွက်များများ အဝယ်များ လာရင်တော့ ပဲစင်းငုံဈေးနှုန်းဟာ ကျပ်တစ်သိန်းအထက်ကို ဈေးတက် သွားနိုင်ပြီး ထုတ်မရောင်းသေးပဲ ဈေးကွက်အခြေအနေကို စောင့် ကြည့်နေတဲ့လှောင်လက်တွေလည်း ရှိနေတယ်” ဟု မန္တလေးပဲကုန်စည် ဒိုင်မှ ပဲကုန်သည်ဦးကျော်ကျော် က မေ ၁၇ ရက်တွင်ပြောကြားသည်။
ပြည်တွင်းဈေးကွက်အခိုင် အမာရှိနေသော ပဲကြီး၊ ထောပတ် ပဲ၊ ဘိုကေပဲ၊ မြေထောက်ပဲတို့မှာ ဈေးကွက်သို့ပုံမှန်ဝင်ရောက်မှုရှိ နေ၍ ကုလားပဲအုပ်စုဝင်များမှာ ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုနည်းပါးပြီး နှမ်းအသစ်များ ဝင်ရောက်လာ တော့မည်ဖြစ်သောကြောင့် နှမ်း ဈေးနှုန်းကျဆင်းလာသည်။ ယခုရက်ပိုင်း ကုန်စည်ဒိုင် တွင် ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသောကုန် စည်ဈေးနှုန်းများမှာ ကုလားပဲ (ထိုင်ဝမ်)တစ်အိတ် ကျပ် ၈၃ဝဝဝ၊ ဗွီတူးတစ်အိတ် ကျပ် ၈၄ဝဝဝ၊ ဗွီ ဆဲဗင်းတစ်အိတ် ကျပ် ၇၈ဝဝဝ၊ မတ်ပဲ(အသစ်)ကျပ် ၇၇ဝဝဝ မှကျပ် ၈၂ဝဝဝ အတွင်း ပဲစင်းငုံဖြူ(အသစ်) တစ်အိတ် ကျပ် ၉ဝဝဝဝ နှင့်(အ ဟောင်း)တစ်အိတ် ကျပ် ၈၂ဝဝဝ၊ ပဲစင်းငုံနီ(အသစ်)တစ်အိတ်ကျပ် ၉၇ဝဝဝ နှင့် (အဟောင်း)တစ်အိတ် ကျပ် ၈၇ဝဝဝ၊ ပဲတီစိမ်း(ရွှေဝါ) တစ်အိတ်ကျပ် ၁၁၉ဝဝဝ၊ ပဲကြီး တစ်အိတ်ကျပ် ၉၅ဝဝဝ၊ ပဲထော ပတ်တစ်အိတ်ကျပ် ၁ဝ၇ဝဝဝ၊ ဘို ကေပဲတစ်အိတ်ကျပ် ၉ဝဝဝဝ၊ မြေ ထောက်ပဲတစ်အိတ်ကျပ် ၁၂၅ဝဝဝ၊ နှမ်းညိုတစ်အိတ်ကျပ် ၁၆၅ဝဝဝ၊ နှမ်းဖြူတစ်အိတ်ကျပ် ၁၈ဝဝဝဝ အသီးသီးရှိသည်။
ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် တေးသီချင်းများဖြင့် ဖျော်ဖြေမည့် 'ရွှေနှလုံးသား ဂီတည' ဂီတဖျော်ဖြေပွဲပြုလုပ??
အောင်လံမြို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြေးရုပ်၊ ပြည်သူ့ရင်ပြင်နှင့် ကလေးကစားကွင်း အပ်နှံပွဲအခ